Vectors, sumadaha, calaamadaha iyo astaamaha qaab retro ee bilaashka ah! | Abuurista khadka tooska ah
Fran Marin | | Dhiirrigelinta, Kaararka kartoonka
Ma jeceshahay bilicsanaanta guridda? Ma qorsheyneysaa inaad ka shaqeyso fikraddan? Shabakadda runti way kuu sahlanaan doontaa inaad ka gasho dhammaan noocyada kheyraadka. Sidaa darteed, waxaa lagugula talinayaa intaadan bilaabin inaad ka shaqeyso naqshadeyntaada oo aad shaqada u soo degto, waxaad ka cabaysaa ilo badan. Ku dhiirrigelso, fiiri shaqooyinka kale, xayeysiinta, sawirrada, xitaa bogagga shabakadda, wax waliba way socdaan! Hal abuurka tooska ah ee loo yaqaan 'Creativos Online' waxaan kuugu tala galnay iskudubarro dhowr ah oo waxtar badan yeelan kara, laga bilaabo logos guridda, buugaagta caadiga ah, mawduucyada wordpress a burush o gradients.
Waxaad sidoo kale awood u leedahay inaad isticmaasho qaar badan oo ka mid ah ilahaas (bilaash ama lacag la'aan) adigoo soo dejinaya feylal wax laga beddeli karo si aad ula shaqeyso Dabcan, waa inaad hubisaa inaadan jebinaynin erey kasta oo xuquuqda daabacaadda ah, sidaas darteed waa inaad si fiican naftaada ugu wargelisaa ilaha aad isticmaaleyso iyo shuruudaha la dejiyay.
Maanta waxaan la wadaagi doonnaa xulitaan ka kooban 110 cunsur qaabka dib u dhaca. Laga soo bilaabo badhamada, calaamadaha iyo dulinka ilaa sawirada iyo astaamaha. Dhammaan ilaha aad ku leedahay liiskan waa bilaash, marka… Ku raaxayso!
Laga soo bilaabo ilaha la isticmaalay, waa inaan sheegaa in bangi muuqaal aad u dhameystiran oo gaar ah loo yaqaan Dib-u-celinta. Boggan waxaad ka heli kartaa dhammaan noocyada maaddada garaafka iyada oo loo marayo mashiinkeeda raadinta ama adigoo daalacanaya qaybaheeda. In kasta oo ay lacag la’aan tahay, waa inaad buuxisaa shuruudo gaar ah si aad u isticmaasho agabkeeda. Websaydhkani wuxuu u oggolaanayaa qorayaasha iyo qorayaasha iskaa wax u qabso inay u isticmaalaan sawirradooda bilaash illaa iyo inta ilaha tixraac laga helayo isla markaana xiriiriye lagu daro bogga laftiisa. Si kastaba ha noqotee, marka la eego joornaalada iyo warbaahinta kale, waa inay la xiriiraan maamulayaasha bogga. Qayb ka mid ah walxaha aad ka heli doontid boostadan ayaa laga helay Dib-u-celinta, laakiin sidoo kale waxaan ka helay waxyaabo xiiso leh Fribble, Blugrafic ama Freepick (Tan waxaad ka heli doontaa qaybta caymiska). Waxaad leedahay fursado ballaaran oo kala duwan, ka faa'iideyso.
Xargaha caadiga ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Vectors, sumadaha, calaamadaha iyo astaamaha qaab retro ee bilaashka ah!